Azo atao ve ny mividy bakoka ambony?
Raha toa ianao ka mihazakazaka ny tranonkalan'ny orinasa na farafaharatsiny mitazona bilaogy manokana mandritra ny fotoana fohy dia tsy maintsy efa zatra loatra ianao. Midika izany fa ny hevitra te hividianana lamandy avo lenta dia namakivaky ny sain'ny tanora webmaster na ny tompona orinasa an-tserasera, ankoatra ny tsy fotoana na roa. Alohan'ny zavatra hafa, azo atao ve ny mividy bakoka ambony? Ary ity no tokony ho raisintsika ho azo antoka - eny, afaka mividy rohy avo lenta avokoa ny rehetra, tsy misy hevitra eto. Saingy ny fanambaniana dia mampanantena fa ampy hametrahana ny tetikasa manontolo amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny sazy henjana toy ny famaizana sazy? Tsy mino aho.
Mazava ho azy, ny fihazàna rohy voajanahary sy organika dia asa goavana sy maharitra ho an'ny ankamaroantsika. Izany no antony nahitako olona marobe izay nanapa-kevitra ny hividy bakipika avo lenta izay mino fa afaka manampy amin'ny fampitaovana ny tranokalany na blôgy eo an-tampon'ny lisitry ny valin'ny fikarohana Google. Amin'izany fomba izany, efa nandre momba ireo mpitoraka bilaogy mahomby aho izay manao tombontsoa tena tsara amin'ny alalan'ny fitaovana isan-karazany, fiaraha-miombon'antoka, ary mazava ho azy fa manome ny backlinks for sale. Saingy ny ankamaroan'izy ireo dia mbola mitohy noho ny sazy mihoam-pampana ataon'ny mpikaroka, manaraka ireo fanavaozana algorithm lehibe natolotry ny Google tamin'ny taona faramparany.
Na dia izany aza, inona no mahatonga an'io olana io - hividianana lamandy avo lenta na avoakany tsy misy vidiny? Ity adihevitra mahatsiravina ity dia noforonina noho ny fahitana hita fa tsy afaka manao asa fotsiny ny fividianana refy. Izany no mahatonga ireo tompona fandraharahana an-tserasera maro mbola hampihatra an'ity teknolojia de-facto Black-Hat SEO ity noho ny loza aterany. Na izany na tsy izany, misy soso-kevitra maromaro momba ny volavolan-dalàna voaofana, ny kalitao ary ny vokatra azo antoka indrindra. Raha mbola manapa-kevitra ny hividy rindrankajy avo lenta ianao na inona na inona toe-javatra misy anao, aza atao farafaharatsiny farafaharatsiny avoakan'ny lamosina avo lenta amin'ny vidiny mora foana.
Midika eto aho fa ankoatra ny mety hisakanana ny vola sy ny zavatra andrasan'ny raharaham-barotra, ny takelam-pifandraisana mavesa-danja amin'ny ankapobeny dia mampidi-doza hatrany hatrany. Ny ankamaroan'ny olona, ​​ny olona mifototra amin'ny indostria maloto fitondran-tena dia manao izay tsara indrindra mba hahazoana tombony be indrindra amin'ny drafitr'izy ireo - na dia eo aza ny fandraisan'izy ireo ny spammy indrindra ary noho izany ny 100% hetraketraky ny orinasa an-tserasera, toy ny filokana, ny fanafody ary ny fanitsakitsaham-bady. Vokatr'izany, ireny rehetra ireny dia mahatonga azy ireo ho mora kokoa hojerena ary tratrako amin'ny boot crawling Google - azo antoka, havoaka izy ireo, resaka fotoam-potoana fotsiny.
Raha te hividy rindrankajy avo lenta kokoa ianao amin'ny fananana kely kokoa tsaratsara kokoa mba hisorohana ny farafaharatsiny farafaharatsiny (ny fanimbana toy ny fanimbazimbana tanteraka ny fahefanao) ireto toro lalana sy soso-kevitra manaraka ireto:
Halaviro ireo fonosam-pifandraisana mivelatra maneran-tany; Tsy maintsy mividy rohy tsirairay avy ianao.
Aza avela ho mihoatra ny 10% ny totalin'ny raoala voajanahary ny lany tambatra azo omena anao.
Mitazona ny tranonkalanao hiala amin'ny rindrina ankavia, tongotra, na rohy amin'ny tranokala; Hividy rohy amin'ny votoatiny fotsiny ianao raha tokony.
Mankanesa amin'ireto tompon-tranonkala ireto fotsiny, ary aza adino amin'ny orinasam-pifandraisana hafa na mpanamboatra bakeraly.
Raha ny zava-drehetra, raha mahita tranokala iray izay manolotra mivantana rindran-kiady ho an'ny fivarotana ianao, dia ataovy azo antoka fa hiala amin'io toerana io amin'ny fotoana fohy Source .